मौसम परिवर्तनमा जोखिमपूर्ण रोगहरू - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ मौसम परिवर्तनमा जोखिमपूर्ण रोगहरू
मौसम परिवर्तनमा जोखिमपूर्ण रोगहरू
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७५ चैत्र २७ गते, ०९:५२ मा प्रकाशित
जाडो मौसमको अन्त्य हुँदै गर्मी मौसम सुरु हुन थालेको छ । यसका साथै गर्मी मौसमको सुरुवातसागै विभिन्न ब्याक्टेरिया पनि सक्रिय हुन थाल्छन् । जसका कारण झाडापखाला, टाइफाइड, जन्डिसजस्ता रोगले पनि सताउन सक्छन् । हामीमध्ये धेरैले अझै पनि जाडो मौसम नै सम्झेर बिहान पकाएको खाना बेलुका र बेलुका पकाएको बिहान खान छाडेका छैनौँ । यस्तो गल्तीका कारण हामीलाई विभिन्न रोगले सताउन सक्छ ।
अर्कोतर्फ जाडो गइसक्यो भनेर हामी वास्ता गर्दैनौँ । तर, बिहान बेलुकाको समय अझै चिसो हुँदा भाइरसहरू सक्रिय हुन्छन् । जसले गर्दा मौसमी रुघाखोकीले पनि सताउन सक्छ ।
यिनै रोगबाट बच्नका लागि चिकित्सकसँग भिषा काफ्लेले केही सल्लाह मागेका छन् ।
दूषित पानी र बासी, सडेगलेको खानाले झाडापखाला लाग्छ । विशेषगरी गर्मी समयमा यसका ब्याक्टेरिया सक्रिय हुन थाल्छन् । तर, चिसो मौसम नै भएको भान पर्न गई जथाभावी पानी पिउँदा तथा बासी तथा सडेगलेको खाँदा झाडापखालाले सताउने गर्छ । गर्मी मौसम बढ्दै जाँदा सबैभन्दा बढी झाडापखालाको केस आउने गरेको स्वास्थ्यसेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले बताए । झाडापखालाले मानिसलाई जलवियोजन गराई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा समेत असर गर्ने उनको भनाइ छ । यदि खानेकुरामा ध्यान नदिने हो भने आउँ पर्नेसम्मको समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
‘अझसम्मको रिपार्ट हेर्दा जाडोबाट गर्मी सुरु हुने समयमा झाडापखालाका बिरामी बढी आएको पाएका छाँै ।’ उनले भने ‘त्यसका साथै आउँको समस्या पनि देखिएको छ ।
धेरै तिर्खा लाग्ने, छटपटी हुने
आँखा गढेको देखिने
पेटको छाला तानेर हेर्दा हतपत नफर्किने
हेपाटाइटिस ए/ई (जन्डिस)
जाडो महिना सकिएर गर्मी सुरु हुँदा देखिने अर्को रोग भनेको हेपाटाइटिस ए र ईको समस्या हो । ए प्रत्येक वर्ष देखिइरहन्छ भने हेपाटाइटिस ई पनि केही वर्षको अन्तरमा स्थान विशेषमा देखिने गरेको सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् । यी दुवै हेपाटाइटिसका कारण जन्डिस हुन सक्छ । जन्डिसले कलेजोलाई असर पार्छ । गर्भवती महिलालाई जन्डिस भएमा सबैभन्दा बढी खतरा मानिन्छ ।
कलेजो रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. अनिल मिश्रका अनुसार शरीरमा हुने पहेँलोपनको मात्रा बढ्नु नै जन्डिस हो । पहेँलोपना बढ्ने कलेजोभित्र र कलेजोबाहिर लाग्ने रोगले गर्दा हो । कलेजोबाहिर पित्तको नलीमा केही खराबी भयो भने त्यो बाहिरको जन्डिस हो । त्यसलाई सर्जिकल जन्डिस भनिन्छ । कलेजोभित्र हुने जन्डिसलाई मेडिकल जन्डिस भनिन्छ । दूषित पानी सेवनका कारण जन्डिस लाग्ने मिश्र बताउँछन् ।
शरीर पहेलो हुँदै जाने,
दूषित पानी र खानपानमा हुने असरका कारण देखिने अर्को रोग भनेको टाइफाइड हो । जहाँ पायो त्यहाँको पानी नउमाली पिउने, सहरका गल्लीमा बनाइएका खाना जथाभावी खाने रसफापानीले नपखाली फलफूल खाने गर्दा टाइफाइडको सम्भावना
धबढी हुन्छ । असुरक्षित खाना र फोहोर पानीमा पाइने सालमोनेलाटाइफी ब्याक्टेरियाका कारण टाइफाइड लाग्छ । आन्द्रामा ज्वरो आउने समस्याका कारण टाइफाइड हुने हुँदा यसलाई ‘आन्द्राबाट आउने ज्वरो’ पनि भनिन्छ ।
दुई हप्ता कटेपछि कलेजो, फियो बढ्ने कडा खालको टाइफाइड भएर लामो समयसम्म रहेमा आन्द्रालाई प्वाल पार्ने सम्भावना
यी रोगबाट बच्न सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. वासुदेव पाण्डेका सुझाब :
डा. वासुदेव पाण्डे सरुवा रोग विशेषज्ञ
सरुवा रोग विशेषज्ञ
सफा साबुनपानीले हात धोएर मात्र खानेकुरा खाने
सधैँ उमालेको शुद्ध पानी मात्र पिउने
घरबाहिरबाट आएपछि, शौचालय गएपछि साबुनपानीले राम्ररी हातखुट्टा धुने
बाटो छेउमा अव्यवस्थित रूपमा बनाइएका खाना नखाने
फोहोर र झिँगा भन्केका खानेकुरा नखाने
नपाकेको मासु, खानालगायत खानेकुरा नखाने
फलफूललाई सफा पानीले धोएर खाने
खानेकुरालाई राम्ररी छोपेर राख्ने
भरसक ताजा खाना खाने